Muqdisho: Dib u eegis lagu sameynayo xukunadii ay rideen garsoorayaal shaqada laga eryey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Dib u eegis lagu sameynayo xukunadii ay rideen garsoorayaal shaqada laga eryey
A warsame 30 October 2014
Mareeg.com: Xeer Ilaaliyaha Qaranka, Axmed Cali Daahir ayaa warbaahinta Muqdisho ugu sheegay in dib u eegis lagu sameynayo xukunadii ay rideen ilaa 21 garsoore oo shalay la shaaciyey in shaqada laga joojiyey iyadoo lagu eedeeyey ineysan ku shaqeyneyn qaab sharci ah.
Sidoo kale, Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in dib u eegistaas saameyn doobto garsoore kasta ee hadda u shaqeeya qaab aan sharci aheyn, balse ka maqan liiska 21-ka ah ee wareegatda madaxweynaha lagu xusay.
Xeer Ilaaliyaha ayaa xusay in garsoorayaasha lagu dhegan yahay ay iska shaqeynayeen iyadoo lagu soo magacaabin wareegto kazoo baxday madaxweynaha Soomaaliya.
“Dib u eegis ayaa lagu sameyn doonaa xukunadii ay soo saareen intii garsoorayaashaas hayeen xilkaas sharci darrada ah, haddii ay tahay xukunadii dilka ahaa ee ay xukmimyeen, haddii ay tahay xukunadii xabsiga ahaa ee garsoorayaashaasi dadka xurriyadda kaga qaadeen iyo haddii ay tahay hantidii ay dadka ku kala xukumiyeen” ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Qaranka, Axmed Cali Daahir.
“Inta hadda qoran waa 21, laakiin wareegtadu maaha 21-kaas kaliya ee waxey saameyneysaa garsoore kasta oo si sharci darro ah ku haya howl-garsoor, tiraduna intaas wey ka badan kartaa” ayuu sidoo kale yiri Axmed Cali Daahir.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 21 garsoore oo shaqeeya maxkamado kala gedasan shaqada ka eryey ilaa sida la yiri laga ilaa iyo inta laga waafajinayo sharciga.